सयपत्री माला किन मिल्काउनु ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
नाथ्रीफुट्दा धेरै रगत बग्न रोक्ने अचुक औषधी भनेकै सयपत्री फूल उमालेर सेलाएको पानी नाकमा हाल्नु हो । रजस्वला र पाइल्समा सामान्यभन्दा बढी रगत बगेमा सयपत्रीको पातको लेदोलाई चौथाइ थुर्मी गाईको घिउमा हल्का भुटेर खाने चलन अद्यापि छँदैछ ।
आज विश्व बजारमा सयपत्रीको चिया,ट्याब्लेट, गोली र क्याप्सुल तथा दृष्टिबद्र्धक चूर्ण, रगत सफा गर्ने जुस, छालाको लागि क्रिम आयुर्वेदिक सप्लिमेन्टका रूपमा बिक्री भइरहेको छ । हामी भने भाइटीकाको मालामा सीमित गरी गमक्क परी बसेका छौं । अरु जे होस्, दिदीबहिनीको धन्य मनले दाजुभाइलाई सयपत्री गाँसेर माला लगाइदिने पवित्र संस्कृतिमा भने हामीले जति गर्व गरे पनि हुन्छ ।
हामी दुर्लभ र बहुमूल्य जडीबुटी अनि मणिको सिरानी हालेर सुतिरहेका छौं । हाम्रा बलियाबांगा युवा भने खाडीको उराठ मरुभूमिमा भविष्यको खोजीमा भौंतारिँदैछन् । हामी परदेशी आयातमा सर्वस्व गुमाइरहेका छौं । कमजोरी कहाँ भयो ? सरकारमा वा हाम्रो आफ्नै सुझबुझमा ?
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०७:४५